Voasoroka ny loza teny 67 HA Lehilahy nanolana tovolahy saika matin’ny fitsaram-bahoaka
Nitrangana fanolanana tovolahy iray teny amin’ny faritra 67ha afak’omaly atoandro. Lehilahy toa azy ihany koa ilay nanatanteraka ny asa ratsy.
Voasorok’ireo tovolahy teo an-tanàna ny fitsaram-bahoaka fa efa nisy niaraka tamin’ny vatan-kazo sy ny vato nikasa hamongotra ity voasaringotra tamin’ny fihetsika mamoafady heverina fa sodomita ity. Raha ny filazan’ny loharanom-baovao izay nanatri-maso sady nandalo ka taitra tamin’ny fitangoronana, nahatezitra ireo mponina ny fahasahian’ity rangahy ity tamin’ny andro atoandro be nanahary mamoafady, manohitra amin’ny lalàna voajanahary amin’ny maha-mitovy fananahana azy ireo.
Voalaza fa tonga dia notolominy ilay tovolahy izay sendra nandalo ary nokasainy hanamparany ny filany. Samy niezaka nandray ny andraikitra tandrify azy ireo mponina teo amin’ny manodidina ka nentina teo amin’ny fokontany ny fandaminana ny disadisa, indrindra ny fisorohana ny valifatim-bahoaka. Ny fampitam-baovaon’ny teny an-toerana no nahalalana fa efa doroky ny zava-mahadomelina ity voapanga ho nikasa nahavanon-doza ity.
Mitaky hetsika na “opération” goavana ifandrombonan’ny mpitandro filaminana sy ny olom-pirenena ny fanafonganana ny rongony eto Madagasikara, izay fototry ny asa ratsy maro. Nitobaka be mantsy ny famatsiana azy ity tato ho ato. Betsaka ny voasambotra fa tsy vitsy koa ireo rangory fototry ny afo tahaka ireo atidohan’ny trafika sy ny fambolena ary mpambongady azy io.